Umlilo unyanzelise isibhengezo sentlekele sesibini | News24
Umlilo unyanzelise isibhengezo sentlekele sesibini
IINKOKHELI zopolitiko zaseKouga zisebenzisene nabeenkonzo zocimo-mlilo nabeenkonzo zikaxakeka bakwamasipala, abe Working on Fire kwakunye neLongmore MTO, ekucimeni umlilo kwakunye nasekunciphiseni ubuzaza bawo kummandla waseThornhill/Longmore ukususela nge-7 ukuya nge-23 June 2017.
Kodwa ngosizi kuye kwabhubha abantu ababini. Iihekthare ezimalunga ne-27 000 zomhlaba weefama kwakunye nezityalo ziye zatshabalala, kwakunye nezakhiwo nezixhobo zokusebenza.
Abahlali baseLongmore Village nabanye abakwiifama ezikufuphi kuye kwanyanzeleka ukuba bakhutshwe ezindlini bekhutshelwa kwiholo yoluntu yaseThornhill, apho baye baxhaswa khona ngokutya, ngoomatrasi, iingubo kwakunye nezinto zokuhlamba.
Umasipala uye waqhuba iphulo elikhulu lokucelela izibonelelo abo bahlelwe yintlekele kwakunye nabacimi-mlilo ebebesebenza emhlabeni. Sifumene inkxaso encomekayo, hayi kubahlali balapha kuphela, kodwa kwilizwe lethu liphela.
ILongmore Village ide yalahlekelwa nangumbane kwakunye namanzi abalekayo iiveki ngenxa yomonakalo obangwe ngulo mlilo kwiziseko. UMasipala waseKouga uye weza ne generator kwakunye nezindlu zangasese ezithuthwayo ukunceda abahlali ngeli xesha likaxakeka.
IBhunga laseKouga liye lenza isibhengezo sendawo yentlekele nge-12 June 2017 ngenxa yalo monakalo walo mlilo.